ဌက်ပျောသီး လှေကားေ၇ခဲေ၇ မျောက်များ ကျွန်တော်တို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဌက်ပျောသီး လှေကားေ၇ခဲေ၇ မျောက်များ ကျွန်တော်တို့
ဌက်ပျောသီး လှေကားေ၇ခဲေ၇ မျောက်များ ကျွန်တော်တို့
Posted by kooo on Jun 21, 2011 in Copy/Paste |9comments
မိတ်ဆွေတို့ရေ … စမ်းသပ်ချက် တခုမှာ သိပ္ပံ ပညာရှင်များဟာ မျောက် ၅ ကောင်ကို လှောင်အိမ် တခုထဲမှာ အတူတူ စုထား လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ လှောင်အိမ်ရဲ့ အလယ်တည့် တည့်မှာ လှေကားတစင်းထောင်ထားပြီး လှေကားထိပ် မှာတော့ ငှက်ပျောသီး တဖီးကို တင်ထားပေး သတဲ့ကွယ်။
ဟော … မကြာပါဘူး။ မျောက်တွေဟာ သူတို့အထဲက တကောင်ကောင် လှေကားပေါ်တက်ဘို့ ကြိုးစားတာနဲ့ အဲဒီ အကောင်ကို ကျန်တဲ့ လေးကောင်က ၀ိုင်းပြီး ထုကြ နှက်ကြတော့တာဘဲတဲ့။ အဲဒီအခါမှာတော့ ရေအေးနဲ့ ပက်ဖြန်းတာကို ရပ်နားထားလိုက်တော့ သတဲ့ကွယ်။
ဒီလိုအနေအထားမှာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ မူလမျောက်ငါးကောင်ထဲက တကောင်ကို လှောင်အိမ် ထဲက ထုတ်။ သူ့နေရာမှာ မျောက်အသစ်တကောင်နဲ့ လဲလှယ်အစားထိုးလိုက်တယ်။ မျောက်အသစ်ဟာ လှောင်အိမ်ထဲကို ရောက်တာနဲ့ (မျောက်ပီပီ) လှေကားပေါ်ကို ပြေးတက်ပြီး ငှက်ပျောသီကို ယူဘို့ ကြိုးစားတော့တာပေါ့။ ကျန်တဲ့ လေးကောင်ကလည်း ထုံးစံအတိုင်း မဆိုင်းမတွ သူ့ကို ၀ိုင်း သြမဋ္ဋ ကြသတဲ့။ (ကွိကွိ … ကွကွ … ကွိကွ … ခွေးမသားမျောက် … ဆော်ပစ် … ကွစ်ကွစ်)
ဒုတိယ မျောက်အသစ်တကောင်ကို မျောက်အဟောင်းတကောင်ရဲ့ နေရာမှာ ထပ်မံ အစားထိုး ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း အလားတူ အဖြစ်မျိုး ထပ်ဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ စိတ်ဝင်စား ဘို့ကောင်းတာက ဒုတိယ မျောက်သစ်ကို ၀ိုင်းဝန်းထုနှက်ကြတဲ့အခါ သူ့အရင်ရောက်တဲ့ မျောက်အသစ်ကပါ ဘုမသိ ဘမသိ ၀င်ပြီး ထုနှက်တာကို တွေ့ရသတဲ့။ (ကြည့်ရတာ လူတွေသာမက မျောက်တွေလည်း ဆွမ်းကြီးလောင်းရတာ ၀ါသနာပါပုံရတယ်ကွဲ့။)
မိတ်ဆွေတို့ရေ … အခုဆိုရင် လှောင်အိမ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ မျောက်ငါးကောင်လုံးဟာ နောက်မှ ရောက်လာကြတဲ့ မျောက်အသစ်တွေချည်းပေါ့ကွယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ ရေခဲရေနဲ့ ပက်ဖြန်းတာကို တခါမှ မကြုံခဲ့ရဖူးဘူးကွဲ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ထဲက တကောင်ကောင် လှေကားပေါ်ကို တက်ဘို့ကြိုးစားရင်တော့ ကျန်တဲ့လေးကောင်က ၀ိုင်းဝန်းပြီး ထုကြနှက်ကြဆဲဘဲတဲ့။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် အဲသလို ထုနှက်ရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုတော့ မျောက်ငါးကောင်စလုံး လုံးဝ မသိကြရှာဘူးတဲ့ကွယ်။
ကဲ … ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါဘဲကွယ်။
မိတ်ဆွေတို့ရေ … အဲဒီမျောက်ငါးကောင်ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အပြုအမူကို လူ့အဖွဲအစည်း အတွင်းမှာ ရော တွေ့ဘူး ကြုံဘူးပါသလား။
သူငယ်ချင်းကပို့ပေးတာပါ ဘယ်က၇မှန်းတော့မသိပါဘူး အားလုံးကိုသိစေချင်လို့ပါ
View all posts by kooo →
သူငယ်ချင်း မေးပို့တိုင်း မတင်ပါနဲ့
ကိုယ်ကြိုက်ရင် ကိုယ်ဖတ်ပါ.. ဒီမှာ ကိုယ့်ထက် ဦးအောင် တခြားလူတွေ တင်ပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ်။
မေးနဲ့ လာတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဖော်ဝပ်မေး တင်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။
စည်းကမ်းချက် နံပါတ် ၄ ညှိနေပါတယ်။
အသစ် တယောက်ကို အခုမှ စ လာလာချင်း ဒီလို ပြောရတာ စိတ်မကောင်းပေမဲ့..
အရှေ့မှာ ဒီလိုပဲ ကော်ပီတွေ ဖော်ဝပ်မေးတွေ တင်တဲ့ လူတိုင်းကို ရွာမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် နိပ်ကွပ်နေပါတယ်။
စီမံချက် ရှိတုန်း အံမ၀င်တာ လုပ်မိရင် ရွာကလူတွေ ၀ိုင်းနိပ်ကွပ်တာ ခံရနိုင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။
အများ နဲ့ တယောက် မဖြစ်ရလေအောင် နောက် ဒါမျိုး မတင်ပါနဲ့။
ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့ စာမူလေးတွေ တင်ပေးစေလိုပါတယ်။
ကော်ပီ တိုက်ဖျက်ရေး စတင်နေပါပြီ ဗျို့ … သဂျီးဘက်မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်…။ ကော်ပီတွေဆို ပွိုင့်မပေးပါနဲ့ …. ။
ကိုယ့်ဖာသာ ရေးတင်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ ….
ဖတ်ဘူးတာတော်တော်ကြာနေပြီး ဒီထဲမှာ တင်ဘူးပါတယ်။
ဒီဆိုက်ရဲ့အကျိုးအတွက် အများရှေ့ထွက်ပြီး အမုန်းခံပြောပေးနေတဲ့ ဆူး ၊ etone အပါအ၀င် မန်ဘာဟောင်းများကို ချီးကျူးပါတယ်။ ကိုယ်က လူဟောင်းပဲဆိုဦးတော့ နောင်အဆဲမခံရအောင် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလို့လဲ ရလျှက်သားနဲ့ မနေနိုင်တာကိုက ရွာအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာကို မြင်သာစေပါတယ်။ အဲသည်လိုမန်ဘာများ ရအောင်စုဆောင်းထားတဲ့ ဆိုက် အက်ဒမင်ကိုတော့ (ဖါးတယ်ထင်ကြမှာစိုးလို့) ထည့်မချီးကျူးတော့ပါဘူး။
တကယ်လို့များပေါ့လေ – ပညာရှင်တွေများတယ်ဆိုတဲ့ ဒီဆိုက်မှာ တင်လာတဲ့စာမူ post တွေ အရည်အသွေး အရမ်းနိမ့်နေရင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ဝေဖန်ပေးမယ့် စေတနာရှင်တွေများရှိလာရင် ပိုစ့်တင်သူတွေက ပိုဂရုစိုက်လာမှာမို့ ဒီရွာကြီး အခုထက်ပိုပြီး လှပလာမှာပါ။
ဒီဆိုက်ရဲ့အကျိုးအတွက် အများရှေ့ထွက်ပြီး အမုန်းခံပြောပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးခည
အစိမ်းကဒ် မပေးဘူး အနီ ပေးသွားတယ် စွာတယ်ပြောလို့..
သူများ အကောင်းပြောနေတာ အပြု သဘော မဆောင်ပဲ အပျက်သဘော ဆောင်လို့ အနီ ပေးလိုက်တယ်။ အစိမ်းရထားလို့ အနီ ပေးတာ အစိမ်းပျောက်သွားတယ်။
ဟွန့်.. မမပု.. မမပု နာနာထုလို့ ပုတဲ့ မမပု။
ဟုတ်တယ်ဗျ ဖော်ဝပ်မေးနဲ့ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့စာတွေကို မတင်သင့်ဘူး။
တင်မယ်ဆိုရင်တောင်မှာ ဆောင်းပါးအစမှာ ကြိုပြီးဘယ်ကရလာတယ်ဆိုတာရေးသင့်တယ်။
အားလုံးဖတ်ပြီးမှ သူများဟာတွေကူးပြီး တင်ပေးတာတွေဖြစ်နေတော့ ဖတ်ရတာအောက်တယ်။
ဟုတ်တယ်ဗျာ အခုတလော ဖော်ဝပ်မေးတွေကို တော်တော်များတင်လာကြတယ်ဗျာ